Somalia: Nabaddu Waa Quwad - Nabaddu Waa Quruxda Nolosha - Somger
Muuqaalkani waxa aan ugu talo galnay dadka Soomaaliyeed in ay bartaan waaajibaadka dalkooda oo ay kamid tahay in ay nabadda ka shaqeeyaan wanaagana dadka kale u horseedaan. Aduunku dadku iyo dowladu waa kuwo isku xiran oo m acnaheedu tahay hadaan an dad jirin dowladi ma jirto, hadaanan dowladi jirin dad ma jiro.
Taas waxaan ka garan karnaaa macnaha isku xiro dadka iyo dalka. Hadaba nala daawo muuqaalkaan aadka u quruxda badan oo aan ka diyaarinay. Waxaan ka rajeyn in aad ka heli doonto. Daawasho wacan, Ku raaxeyso quruxda dalkaaga.
Fadlan sii faafi oo nagala qeyb qaado baraarujinta dadka Soomaaliyeed. Ogow waa waajib muwaadin walbaa oo Soomaaliyeed saaran.